Quinoa Oligopeptide Powder - Warshad Soo Saaraha
Quinoa Oligopeptide budada
Miisaanka molikaliska ah ee quinoa oligopeptide budada ayaa ka yar 1000u, kaas oo jidhka bini'aadamka si dhakhso leh u nuugi karo. Sidoo kale, quinoa peptides-ka molecule yar-yar waxay leeyihiin firfircooni gaar ah.
Quinoa Oligopeptide Tilmaamaha budada
Product Name Quinoa Oligopeptide budada
Molecular Wsideed <1000u
Color Caddaan ama Jaale khafiif ah
Waa maxay budada Quinoa Oligopeptide?
Budada Quinoa oligopeptide waxaa lagu diyaariyaa qashin qubka, burburin, enzymatic hydrolysis, qalajinta, baakadaha iyo wixii la mid ah.
Waqtigaan la joogo, budada loo yaqaan 'olopopeptide budada' waxaa inta badan loo isticmaali jiray qaybta cuntada daryeelka caafimaadka iyo cuntada shaqeyneysa.
Maxay yihiin faa'iidooyinka budada Quinoa Oligopeptide?
Quinoa antioxidant peptides waxay leeyihiin awood isku hagaajin oo superoxide anical radicals iyo hydroxyI radicals waxayna muujiyaan xiriir qaadashada saamaynta wanaagsan.
Lunasin ku jira quinoa waa nooc ka mid ah polypeptide, kaas oo leh dhaqdhaqaaqyo badan oo bayooloji ah isla markaana hagaajin kara difaac, antihyper -tension iyo anticancer.
Nafaqeysan oo isku dheelitiran
Borotiinka Quinoa wuxuu badanaa ka kooban yahay albumin iyo globulin (44% - 77%). Waxyaabaha ay ka kooban tahay gliadin iyo glutelin way hooseysaa, markaa waxay leedahay kala-bax wanaagsan waxayna u fududahay in jirka bini'aadamku nuugo. Iyo saameynta isku xirnaanta disulfide, borotiinka quinoa wuxuu leeyahay xasilooni wanaagsan, waxay haysaa astaamaha asalka ah iyo nafaqada kadib marka la farsameeyo.
Habka dusha sare ee jawaabta si loo wanaajiyo Enzymatic Hydrolysis ee Buckwheat Protein si loogu diyaariyo Antioxidant Peptides Process.
Horumarka Daraasadda Qaybaha Firfircoon ee Quinoa.
Horumarka Cilmi-baarista ee astaamaha, astaamaha iyo soo saarista Quinoa Protein.
Budada Oligopeptide Budada
Budada Walnut Peptide